Visual Content ဆိုတာဘာလဲ? -
1. Visual content တွေဟာပိုပြီးမှတ်မိလွယ်စေပါတယ်။ မိမိပြောဆိုလိုတဲ့အကြောင်းအရာကို နှုတ်မှပြောတာ စာဖြင့်ရေးသားတာတွေက ယခင်ထဲကအသုံးချလာတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပြီး တကယ်လည်းထိရောက်ခဲ့တာပါပဲ။ ယခုခေတ်မှာတော့ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ မိမိ ကုန်ပစ္စည်း ဝန်ဆောင်မှုစတာတွေကို Image တွေ Video တွေကနေတဆင့်ဖော်ပြခြင်းဟာ လူတွေရဲ့အမြင်အာရုံစိုက်မှုကိုပိုမိုရရှိစေပြီး လူတွေဟာ သာမာန် ရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ရတာထက် Image တွေ Video တွေနဲ့ဝေဝေဆာဆာတွဲဖက်ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာကိုပိုပြီး ဂရုတစိုက် အချိန်ပေးကြည့်ရှုပါတယ်။ ဥပမာ – ပြောရမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Customer ကို သာမာန် Text တွေပဲရေးထားတဲ့စာတစ်ဆောင်ပို့လိုက်ခြင်းထက် Visual တွေနဲ့ဝေဝေဆာဆာဖော်ပြရေးသားထားတဲ့ Email တစ်ဆောင်ဟာ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရပါတယ်။
2. Visual content ဟာလူတွေရဲ့ Share လုပ်ခြင်းကိုပိုရစေပါတယ်။ Image နဲ့ တွဲပြီးဖော်ပြထားတဲ့ Content တွေဟာ အခြားရိုးရိုး Content ထက် ၉၀% ပိုပြီး Sharing လုပ်ခြင်းကိုရစေပါတယ်။ Social media မှာရှိတဲ့ Infographic တွေဟာ သာမာန် Content တွေထက် သုံးဆပိုပြီး User တွေရဲ့ Like and Share လုပ်ခြင်းကိုရစေပါတယ်။ User တွေဟာ Image တွေ Infographic တွေမှာလှလှပပ ဆန်းသစ်ပြီး ဖော်ပြထားတဲ့စာတွေကို သာမာန် Text Only ရေးသားထားတဲ့စာထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုပြီး Share လုပ်ချင်ကျပါတယ်။
3. Visual content ဟာပိုမိုနားလည်လွယ်ပြီး မိမိဆိုလိုရင်းကိုထိရောက်စေပါတယ်။You tube မှာတင်ထားတဲ့ How To ဆိုပြီး ရှင်းပြထားတဲ့ Video တွေအလွန်ခေတ်စားပြီး လူတွေအတွက်ပိုပြီးနား လည်လွယ်ပါတယ်။ သာမာန်ရေးသားထားတဲ့ ရှင်းလင်းချက်ထက် Visual Image တွေ Video ကနေ ဝေဝေဆာဆာရှင်းလင်းချက်တွေက လူတွေအတွက်ပိုပြီးနားလည်လွယ်စေပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ လူတွေဟာ Product အကြောင်းရှင်းလင်းထားတဲ့ Videoclip တွေကြည့်ရခြင်းကို စာဖြင့်ဖတ်ရခြင်းထက် လေးဆပိုမိုနှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Thursday December 27th, 2018/ Blog/0Comment